SHIRKA SAAMILEEYDA: Maxay Milan ka damacsan tahay suuq-jiilaalka Jannaayo? – Gool FM
SHIRKA SAAMILEEYDA: Maxay Milan ka damacsan tahay suuq-jiilaalka Jannaayo?
Raage November 13, 2017
(Milano) 13 Nof 2017 – Marco Fassone ayaa sheegay inaysan Milan laacibiin cusub lasoo wareegaynin suuq-jiilaalka Jannaayo “ilaa aad daruuri u noqoto” kaddib markii shirkii saamileeyda ee maanta lagusoo bandhigay inay kooxdu khasaartay €32.6m.
Sport Mediaset ayaa werinaysa inn Fassone uu warkan ka sheegay shirka oo ku qabsoomay xarunta naadiga ee Casa Milan, iyadoo ay saamileeydu sheegeen in ay Milan khasaartay €32.6m intii u dhaxaysay Jannaayo 1 ilaa Juun 30, taasoo €3.4m ka yar lacagtii ay khasaartay sanadkii hore xillligan oo kale.
Waxaa dheer, milkiilaha Rossoneri ee Li Yonghong oo xaqiijiyay inuu Jimcihii bixiyay €22m, taasoo qayb ka ah qorshaha raasumaal kordhinta kooxda – taasoo lacagta noocaas ah ee uu ilaa Sebtember bixiyay ka dhigaysa €49m isu gayn ahaan.
ITALY VS SWEDEN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!
CAAWA COLTANKU CIYAAR KA BADAN: Imisa ayuu waayayaa Talyaanigu haddii uu ka haro Koobka Adduunka 2018?